Abakhiqizi bezindaba Zemboni & Abahlinzeki | IChina China News Factory
Isikhathi sokuthumela: 02-27-2018
Portescap wethula entsha 16DCT motor wayo ne-torque eliphezulu DCT uhla Athlonix izinjini. I 16DCT motor angabakhulula okuqhubekayo torque engu kuze kube 5.24 mNm ngesikhathi ubude 26mm kuphela. I 16DCT isebenzisa enamandla Neodymium odonsa futhi Portescap Amandla kungase kutholakale kahle coreless design. I optimiz ... Funda kabanzi »
Abathobekile cleaner wezindlu ingenye handiest yasendlini yokuhlanza zikagesi ezisetshenziswa namuhla. Design Its elula nokho ngempumelelo uye obekuzakuphela kokuba ukuhlanza uthuli nezinye izinhlayiya ezincane off evele ngesandla, futhi waphenduka indlu wokuhlanza ibe umsebenzi othe xaxa futhi angabacwasi ngokushesha. Ukusebenzisa lutho bu ... Funda kabanzi »
Mitsubishi Motors uyakhumbula Outlander EX izimoto e China
Mitsubishi Motors Uzokhumbula izimoto 54.672 eChina ngenhloso eziyinkinga windscreen wiper. I khumbula, oqala ngo-July 27, ingabe kuyinkazimulo ukuba amazwe Outlander EX izimoto ekhiqizwa phakathi-Nov 23, 2006 futhi Sept 27, 2012, ngokwemibiko ye-General Administration of Quality Ukugada, Inspection ... Funda kabanzi »
Enikezela izinjini micro encane kunazo zonke futhi enamandla kunazo zonke emhlabeni
Piezoelectric motors ultrasonic kunezimo amabili abalulekile, okungukuthi zabo eziphakemeyo amandla kwabantu nokwakheka kwawo elula, okuyinto kokubili neqhaza miniaturization yabo. Sakhe i-prototype micro motor ultrasonic usebenzisa stator ephethe umthamo we cishe ngamamililitha aphindwe kathathu. Ex yethu ... Funda kabanzi »
Omhlabajikelele nawasekhaya China Micromotor Imboni Umbiko, 2016-2020
Global micromotor okukhipha wema ngasemnyango amayunithi 17.5 billion ngonyaka 2015, eneminyaka engu-on-nyaka ukwanda kwama 4.8%. Ngenxa imikhankaso nesimanje umkhakha futhi imishini, okukhiphayo kulindeleke ukuba ifike amayunithi 18.4 billion ngonyaka 2016 futhi indlela amayunithi 23 billion ngonyaka 2020. China, manufact esikhulu kunazo zonke emhlabeni ... Funda kabanzi »